Xog: Aqlabiyadda Baarlamaanka oo Shuruudo ku xiray Miisaaniyadda 2017, Akhriso Qodobadda Shuruudahaas – Hornafrik Media Network
Xog: Aqlabiyadda Baarlamaanka oo Shuruudo ku xiray Miisaaniyadda 2017, Akhriso Qodobadda Shuruudahaas
By HornAfrik	 Last updated Jul 20, 2017
Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia ayaa Gudiga Maaliyada ee Baarlamaanka oo haatan gacanta ku haya dib u eegida Miisaaniyada 2017 ka dalbaday inay Miisaaniyadaa u soo badhigaan Shacabka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed si ay ula arkaan qaladaadka iyo ku takri falka ka muuqda Miisaaniyada 2017.
Kudlada ay dhawaan samaysteen Aqlabiyadda Baarlamaanka oo la baxday Horusocod ayaa isku dhaarsaday inaysan aqbalin Miisaaniyadda ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda, iyagoona soo bandhigay Qodobo 7 ah oo ay ku xireen Ansixinta Miisaaniyadda, kuwaasoo kala ah:-
1- In Somaliland lagu soo daro Miisaaniyada, arintaa oo astaan u ah Midnimada Dalka iyo Dadka soomaaliyeed
2- In Mushaarka Ciidamada si aad ah kor loogu qaado oo lala simo Mushaarka Shaqaalaha Rayidka ah.
3- In Xafiisyada Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha oo ay u qoran tahay lacag ka badan 11 Milyan oo Dollar si aad ah hoos loogu dhigo, lacagta laga dhimanaya loogu daro Ciidamada Qaranka.
4- In Miisaaniyada lagu daro adeega shacabka loo qabanayo Sida Isbitaalo, Wadooyin, Iskuulo, Shaqo Abuur, Koronto, IWM
5- In Guddi loo saaro Daynta been abuurka ah ee la sheego in Dalka Somalia lagu leeyahay, lana hubiyo sida ay ku timid dayntaasi, waxa ay ku baxday iyo cidda qaadatay, waxaana muuqata inay tahay ifafaalo muujinaya xirfad dalka lagu dhacayo.
6- In la cadeeyo Kororka dhaqaale ee Dalka ee ah 90% ee hore loo shaaciyey ee aan Miisaaniyadana ka muuqan.
7- In la cadeeyo lacagihii Dawladaha shisheeye bixiyeen isla markaana lagu soo cadeeyo Miisaaniyada.
Xildhibaanadda Kudladda Horusocod ayaa ka codsaday Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka inay Xaqiijiyaan wax ka bedelka Qodobadaasi si miisaaniyadda loo ansixiyo.
Shuruudahan ay soo gudbiyeen Kudladan ayaa waxaa sidoo kale taageeray Xildhibaano badan oo aan ku jirin Kudladda, kuwaasoo u arka inay tahay Sixitaan ku salaysan Dawlad Wanaag.
Miisaaniyadda 2017 oo ay Baarlamaanka u soo gudbiyeen Wasaaradda Maaliyadda, kadib markii ay ansixiyeen Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Somalia ayaa buuq badan ka dhex dhalisay Xildhibaanadda. iyadoona Miisaaniyadan ay ka kooban tahay Mushaar, Guno, Shidaal, Kiro iyo Safaro, Kumana jirto Adeegyo Bulsho sida Iskuul la dhisayo, ama la dayac tirayo.
Madaxwayne Farmaajo oo ku baaqay in la joojiyo Dagaalka Xeraale